Fiteny manirery - Wikipedia
Ny fiteny manirery dia fiteny tsy nahitana fiteny velona iray fianakaviam-piteny aminy. Ny fiteny baska, ny fiteny kôreana, ny fiteny aino ary ny fiteny borokasy (ao amin' ny tapany avaratr' i Pakistana), ohatra, dia fiteny manirery. Ny tsy fahafaha-manaporofo ny tsy fisian' ny fiteny iray fianakaviana amin' ny fiteny manirery ankehitriny dia mety ho foana rahampitso, ka ny filazana fa fiteny manirery ny fiteny iray dia mety hiova any aoriana.
Lasa manirery ny fiteny sasany rehefa maty ny fiteny rehetra iray fianakaviana aminy. Izany no mahazo ny fiteny piraha any Brezily, izay fiteny velona farany ao amin' ny fianakaviam-piteny mora. Ny fiteny hafa toy ny fiteny baska dia fiteny manirery hatramin' ny nisian' ny tahirin-kevitra miresaka ny aminy.
Na dia lazaina hoe "manirery" aza ny fiteny iray dia tsy midika fa mitoka-monina ny vondron' olona miteny azy. Ny fiteny baska, ohatra, dia mifampikasoka tamin' ireo fiteny seltika sy amin' ny fiteny rômana manodidina azy.
Ny fiteny manirery dia vokatry ny fifidrà-monina nifandimby sy ny fisoloana fiteny: rehefa tsy ampiasaina intsony ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny tao amin' ny faritra iray fa nosoloana fiteny manjakazaka dia misy ireo sampam-piteny tsy ampiasaina intsony, ka amin' ny farany dia tsy misy sisa afa-tsy fiteny iray. Ny fiteny manirery iray dia singa tokana ao amin' ny fianakaviam-piteny misy azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_manirery&oldid=1037014"
Dernière modification le 1 Septambra 2021, à 15:33
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2021 amin'ny 15:33 ity pejy ity.